Yangon, February (11) Union Minister for Ministry of Hotels and Tourism , U Ohn Maung met with responsible persons from Abercrombie & Kent Travel and Tours in Inya Lake Hotel in Yangon at9AM in February, 10, 2018 and discussed about luxury cruise tours which will...
Tourists have entered through Tarchileik border gateway and have visited Myanmar
by MO HT | Feb 9, 2018 | News |0Comments
Nay Pyi Taw, 9th February The international tourists are continuously entering and visiting in and out of Myanmar through international gateways and cross- border gateways in order to enjoy and observe Myanmar’s natural beauties of landscapes, sceneries, tourist’...
Licenses permitted by Directorate of Hotels and Tourism up to (31-1-2018)
(1)Hotel and Guest House License Hotels in Myanmar - (1605) Hotels, (64578) Rooms (a)Nay Pyi Taw - (64) Hotels, (5463) Rooms (b)Yangon - (390) Hotels, (20245) Rooms (c) Mandalay -...
Union Minister of Ministry of Hotels and Tourism , H.E Excellency , U Ohn Mg calls on Singapore Delegation led by Ambassador H.E Ms.Vanessa Chan Yuen Ying
by MO HT | Feb 8, 2018 | News |0Comments
Nay PyiTaw , 8th February Union Minister of Ministry of Hotels and Tourism , H.E Excellency , U OhnMaung receivedareception from Singapore Delegation led by Ambassador H.E Ms.Vanessa Chan Yuen Ying on the morning of 7th February . Present at the meeting...
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မန္တလေးမြို့ တောင်သမန်အင်း(ဦးပိန်)တံတားတွင် စုပေါင်း အမှိုက်ကောက်ယူခြင်းပြုလုပ်
by MO HT | Feb 7, 2018 | News |0Comments
နေပြည်တော်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၇) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံဖြင့်စဉ်ဆက်မပျက် အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ အမရပူရမြို့ တောင်သမန်အင်း(ဦးပိန်)တံတား ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဧည့်သည်များ ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှတဆင့် လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၇) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု ၊ Bright View Travels & Tours Co., Ltd ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဧည့်သည် (၃၀) ဦးတို့သည် (၂၆-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ် (၁၂) စီးဖြင့် မြ၀တီနယ်စပ်ဂိတ်မှတဆင့်...
မုံရွာမြို့ အတွင်းရှိ ဟိုတယ်များအား စစ်ဆေးခြင်း၊ အကြံပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
by MO HT | Feb 6, 2018 | News |0Comments
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးရုံးခွဲ (မုံရွာ)နှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန(မုံရွာ) တို့ ပူးပေါင်း၍ ပွင့်လင်းရာသီ မရောက်မီ မီးဘေးလုံခြုံရေး...
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၆) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု ၊ Osuga Myanmar Co., Ltd ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည် (၇) ဦးသည် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်(၆) စီးဖြင့် (၂၁-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၃-၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ...
« First« Prev...1020...3031323334...405060...Next »